Outlook Express Fitaovana tsy esorina. Outlook Express Voafafa ny fanarenana ny mailaka.
DataNumen Outlook Express Undelete dia ny tsara indrindra fitaovana hamerenana ireo mailaka voafafa ao Outlook Express. Mampiasa teknolojia avo lenta izy io mba hanaovana scan ny rakitra DBX ary hamafana ny mailaka rehetra araka izay tratra.
Azafady azafady DataNumen Outlook Express Repair hamerenana ireo mailaka avy amin'ny CORRUPT Outlook Express mail folder.
Azafady azafady DataNumen Outlook Repair hamerenana ireo mailaka sy zavatra hafa avy amin'ny fisie CORRUPT Outlook PST.
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,618)
Nahoana DataNumen Outlook Express Undelete?
Fanamarihana fotsiny mba hampahalalana anao fa niasa tsara ilay programa etsy ambony ary sitrana soa aman-tsara aho almost Mailaka 3000 izay sendra ahy tsy nahy
Nanandrana vokatra telo hafa aho talohan'ny nahitako Advance Outlook Express Recovery. Ny roa amin'ireo fandaharana dia nahita ny hafatra rehetra, na izany aza, nisy ireo hafatra
Nanana olana tamin'ny fisie 1.5GB outlool aho, nazoto be aho nefa ny AODR dia namaha ny olako ary nanampy ahy hamerina ny angon-drakitra rehetra, Misaotra betsaka
Endri-javatra lehibe ao DataNumen Outlook Express Undelete v2.2
Tohano hamerenana ireo mailaka voafafa ao amin'ny Microsoft Outlook Express 5/6 lahatahiry mail.
Fanohanana hamerenana ireo rakitra dbx voatahiry ao amin'ny media maloto, toy ny floppy disk, Zip kapila, CDROM, sns.
Tohano mba hamerenana ireo rakitra dbx maromaro.
Tohano hamerenana ny mailaka ao anaty rakitra dbx lehibe toa 4GB.
Tohano hanarenana ireo miraikitra amin'ny mailaka.
Tohano hahitana sy hisafidy ireo rakitra dbx haverina amin'ny solosaina eo an-toerana.
Ampifangaroina miaraka amin'ny akorandriaka Windows, mba hahafahanao mamerina mailaka ao anaty fampirimana mailaka miaraka amin'ny tabilao (tsindrio havanana) menio Windows Explorer mora foana.
Ahoana no fanarenana
Outlook Express mitahiry ny mailaka rehetra ao anaty fampirimana mailaka ao anaty rakitra .dbx mifanaraka aminy. Ohatra, ny rakitra Inbox.dbx dia misy mailaka izay aseho ao amin'ny fampirimana mailaka Inbox ao Outlook Express, ny fisie Outbox.dbx dia misy mailaka aseho ao amin'ny fampirimana mailaka Outbox, sns.
Raha hamafa mailaka maro ao anaty fampirimana mailaka ianao dia afaka mampiasa DataNumen Outlook Express Undelete hizaha ny fisie dbx mifanaraka amin'ny fampirimana mailaka, avereno ireo mailaka voafafa ary tahirizo ho rakitra .eml izay azo ampidirina mora foana indray Outlook Express.
Tadiavo ny rakitra dbx mifanaraka amin'ny lahatahiry mail raha mbola tsy nanao an'izany ianao.
Fanamarihana: Alohan'ny hamerenana ireo mailaka voafafa ao anaty rakitra dbx miaraka amin'i DataNumen Outlook Express Undelete, fenoy azafady Outlook Express ary ny rindranasa hafa mety manova ny fisie dbx.
Safidio ny rakitra dbx izay hahitana ireo mailaka voafafa:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny filename dbx na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ilay rakitra.
Default (nitranga in- DataNumen Outlook Express Undelete hamoaka ny mailaka sitrana rehetra ao amin'ny lahatahiry xxxx_recovered, izay xxxx no anaran'ny fisie dbx maloto. Ohatra, ho an'ny rakitra Inbox.dbx, ny lahatahiry output default dia ho Inbox_recovered. Raha te hampiasa lahatahiry hafa ianao, dia azafady araho araka izany:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny lahatahiry na kitiho ny bokotra hijerena sy hisafidianana ny lahatahiry.
Tsindrio ny bokotra, DataNumen Outlook Express Undelete start manasitrana mailaka voafafa avy amin'ny fisie dbx voafantina.
Aorian'ny fizotry ny fanarenana, raha tafita soa aman-tsara avy amin'ny fisie dbx ireo mailaka voafafa, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Afaka manokatra hafatra sitrana ianao izao Outlook Express amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ny kisary fisie .eml ao amin'ny lahatahiry output. Na manafatra hafatra marobe ao anaty fampirimana mailaka ao Outlook Express.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 dia navoaka tamin'ny 23 Novambra 2013
Tohano ny Windows 7 sy 8.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.1 dia navoaka tamin'ny 17 Jolay 2009
Hatsarao tsara ny fahombiazan'ny motera fanarenana.
Hatsarao ny fifanarahan'ny GUI amin'ny vahaolana samihafa sy ny rafitra miasa.
DataNumen Outlook Express Undelete 2.0 dia navoaka tamin'ny 5 martsa 2009
Mamolavola endrika ny GUI.